CUDURADA QAJAARKA: KA HORTAGGA, ASTAAMAHA, SABABAHA CUDURADA IYO DAAWEYNTA - BEER CAGAARAN
Sida loola tacaalo cudurrada qajaarka
Her beerta khudradeed kasta soo wajahday cudurada iyo cayayaanka dalagyada khudradda. Waa arrin marka ay dhacdo sababtoo ah daryeel xumo, iyo mid kale marka uu geedka xanuunsanayo sabab la'aan. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa sida loo badbaadiyo qajaarka cudurada iyo cayayaanka.
Badanaa, cudurrada qajaarka ah waxaa keena daryeel caafimaad aan habooneyn. Mararka qaarkood fayraska waxaa lagu kala qaadaa qalab ama dhulka.
Cudur fungal ah oo saameeya jirka oo dhan dhulka korkiisa (caleemaha, asliga, ubax iyo miraha). Caabuqa waxaa lagu diiwaangelin karaa carrada, harta dhirta. Sidoo kale, waxaa lagu kala qaadaa hawada, sidaa daraadeedna leh qayb ballaadhan.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah muruqyada fungus, taas oo sababaysa caaryada cawl, waxaa loo isticmaalaa winemaking si aad u hesho qalabka ceeriin leh sonkorta sare.
Xididdada qajaarka badi waxay dhacdaa sababo qoyaan badan iyo heerkul hooseeya. Waqtiyadaas oo kale, dhirta waa la daciifiyay, cuduro badanna waxay isku haleyn karaan weerarka.
muuqaalka kore ee dhibco caarada on asliga ah, caleemaha iyo miraha;
dhibco necrotic on miro (ka dib, in ka dib, qajaarka bilaabaan in qudhmi iyo qalalan);
dhererka weyn ee caleemaha geedka oo dhan;
Cudurku waa khatar, sababtoo ah guuldaro wayn ayaa burburinaysa maahan oo kaliya bushar gaar ah, laakiin sidoo kale dhammaan dhaqamada lagu beeray meel u dhow. Isla mar ahaantaana, sanadka soo socda, kalluunka ayaa ku soo noqon kara khudradda ama miraha miraha, maadaama ay ku sii jiri doonto dhulka.
Foogadani waxay inta badan saameysaa qeybo ka mid ah warshadda oo la xiriirta dhulka. Haddii aad ku beeray strawberries ee dacha, ka dibna aad ogaan kartaa sida miraha waxaa lagu daboolay ubaxyada grayish, ka dibna qudhmi. Isla arrimahan ayaa ku dhacaya qajaar, markaa waxaad u baahan tahay inaad dawo qaadato si aad u badbaadiso dalagga.
Cudurku waa la daaweyn karaa iyadoo la adeegsanaayo fungicides (Fitosporin-M). Ka hor intaadan isticmaalin daawooyinka waxaad u baahan tahay inaad jarjarto dhammaan caleemaha bukaanka iyo caleemaha. Sidoo kale waa in la qiimeeyaa hababka dadweynaha: 300 oo qoryo qoryo ah, jeeso iyo 1 tsp. copper sulfate 10 litir oo biyo ah. Qaddarkani waa ku filan laba duur oo qajaar ah.
Bixiyey iyo wakiilada xakamaynta biochemical, oo ay ku jiraan daroogada Trichodermin. Walaxda firfircooni waa fungus in ay burburiso kallana cawl, iyada oo aan la qaadin wax khatar ah warshadda iyo nin.
Waa muhiim! Dhammaan caleemaha iyo caleemaha saameeyeen ayaa loo isticmaalay meel bannaan si looga hortago dib-u-qaadista.
Tallaabooyinka Ka Hortagga Gubashada:
xulashada noocyo u adkaysta cudurka;
ka saarista haraaga dhirta beerta;
Caleemaha White on qajaarka wuxuu u muuqanayaa marar badan, maadaama uu ku nool yahay ciidda waxaana lagu qaadi karaa masaafo dabaylo leh. Wakaalada keena waa fungus microscopic ah kaas oo masaafo geedka wakhti aan fiicnayn.
Haddii khudradda cagaarshow cagaarshow, markaas korniinka cagaaran sida muuqata. Laga soo bilaabo cudurka this bilaabmaa inuu jeesto top of asliga ah, caleemaha fade, soo jeesto caddaan iyo noqdaan jahwareer.
Sababaha cudurka waa qoyaan kordhay iyo isbeddel deg-deg ah oo heerkulka ah (xaaladaha ugu wanaagsan ee fungus-fog, oo ka yimaada hoos u dhac heerkul ah).
Cudurkani ma aha oo kaliya inuu joojiyo koritaanka qajaarka, laakiin sidoo kale wuxuu ka dhigayaa inuu ku qaato dhammaan xooggiisa dagaalka ka dhanka ah dulinka. Ma jiri doonto wax goosasho ah: midhaha ayaa bilaabi doona inay qalalaan, ka dibna way qudhmi doonaan.
Si aan u fasaxin fangaskaaga qajaarkaaga, waxaad u baahan tahay ka hortaggataas oo ah sida soo socota:
Nadiifinta ciidda laga bilaabo dhirta dhoobo;
quudinta adag (zinc sulphate, HOL, vitriol buluug);
hoos u dhaca qoyaanka hawada (haddii uu soo degay aqalka dhirta lagu koriyo).
Haddii caleemaha cad ayaa hore u gaadhay duurka qajaar, ka dibna waxaa laga saari karaa labadaba hababka dadweynaha iyo diyaargarow gaar ah.
Marxaladaha hore, caleemaha bukaanka ayaa la gooyaa, meesha gooyana waxaa lagu rusheeyaa kareemo firfircoon. Sidoo kale, xaleefyada waxaa lagu baari karaa isku darridda soo socota: Faaruqin iyo daloolin (potassium permanganate) (oo leh qadar yar oo biyo ah).
Hababka noocan oo kale ah ayaa loo isticmaali karaa marxaladda ugu horreysa, ama marka 2-3 duurka ay saameeyeen. Haddii ay duurka u badan yihiin jiran, waxaa fiican inaad isticmaasho fungicides. Kuwa ugu caansan iyo kuwa la awoodi karo waa Oxyhom, Topaz, Rovral SP ama daawooyinka sulfate-ku salaysan.
Waa muhiim! Haddii fangaska ay ku fashilmaan, geedka waxaa gebi ahaanba laga saaraa oo lagu gubaa meel bannaan.
Si aad u ilaaliso dalagyada kale ee aad beeratay sanadka soo socda, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato ciidda leh antiseptic ama fungicide xoog leh.
Kala duwan ee kallana, kaas oo saameeya qeybta dhulka hoostiisa ee geedka. Cudurkan waa mid caadi ah in ay la kulmaan ma aha oo kaliya bannaanka, laakiin sidoo kale bannaanka u badan. Root-koofida (ama lugta madow) wuxuu sababaa fungus ku nool carrada.
Nidaamka xididku wuxuu saameeyaa madow, ruxyo oo gebi ahaanba dhinto. Marka la barbardhigo caleemaha buka, waa arrin aad u adag in la ogaado xididdada jiran, sidaas darteed hanuuni Calaamadaha dibadda ee cudurka:
dhirta xitaa xitaa ka dib markaad waraabiso;
caleemaha waxay bilaabaan in ay qalalaan, iyo cidhiidhi ay muuqdaan iyaga;
ubaxu waxay ku dhacaan ka hor intaan ugxan-soo-baxneyn
qaybta xididka ee asliga ah ee dildilaaca oo u noqda huruud;
wuxuu ka baxaa midab-beddelka oo uu ku daboolaa dhibco madow;
koritaanka baadiyaha ayaa hoos u dhacaya.
Horumarinta caleemaha xididdada Ma ahan oo keliya qulqulinta carrada iyo daryeelka liita, laakiin sidoo kale arrimaha soo socda:
waraabka biyaha ee barafka;
abuurka abuurka aad u qoto dheer;
qalabka cudurka qaba.
Badanaa, jawiga wanaagsan ee fungus waa ciid aad u qoyan. Xitaa haddii aad raacdo xeerarka waraabinta, xun, carrada culus waxay u horseedi kartaa cudurro. Isku day in aad raacdo ciidda, sifooyinka tayada iyo biyaha.
Waa muhiim! Rootka Root ayaa weli dhulka ku jira xitaa ka dib markii ay ka saareen geedaha buka. Sidaa darteed, ciidda waa in la gooyaa, oo intabadan laga hadhaa sanad ka yar.
Bannaanka u badan ayaa xiiso leh waxa loo samaynayo qajaarka si ay uga takhalusaan kallana xidid. Si aad uga gudubto caleemaha rootiga, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho fungicides.
Marxaladaha hore, waxaad isku dayi kartaa hababka dadka: ku dar 1 tsp ilaa 0.5 l oo biyo ah. malab, ash qoryo yar iyo 3 tbsp. l jees jees. Iyada oo dhismahan, daaweynayo aagagga ay saameeyeen geedka.
Sida isticmaalka hababka dadweynaha, iyo fungicides, waxaad u baahan tahay in aad dhulka ka saarto meelaha ay saameysey ee xididdada (haddii, dabcan, tani ma aha qayb weyn oo nidaamka xididka).
Sidoo kale waa mid ku habboon in la xusuusto in kalluunka xididku keeno dhowr nooc oo ah fangaska. Iyadoo loo eegayo baahida loo qabo in la soo qaado fangaska. Ogow nooca saxda ah ee fungus wuxuu ku jiri karaa sheybaarka.
Haddii aad isku dayday dhammaan hababka, qajaarkana ay sii wadaan in ay ku engegaan, markaa waxay sii ahaanaysaa in ay qoddo geedka rootiga oo ka qaadaan goobta.
Si looga hortago soo celinta caleemaha xididada beerta beerta, kharashka tallaabooyin ka hortag ah:
biyaha warshadda si adag ugu hooseyso xididada, ha ku dhicin caleemaha iyo stem;
iska daa jaridda dhirta kulul;
biyaha warshad biyo leh diiran;
dooran kuwa ku haboon (miro, baradhada, basasha ama yaanyada).
Macmacaanka macaanka - waa cudur fungal ah ee foosha ectoparasitic feceri microscopic. Mycelium cad ayaa laga arki karaa indhaha qaawan on caleemaha dhirta: waxay ku rinji yihiin midabka cad, sida hoarfrost.
Marka lagu daro caleemaha, fungus wuxuu kufaraa jirridda, caleemaha yar yar iyo miraha. Marka mycelium bislaado, dhibco yar oo ah foomka biyaha on, taas oo ah sababta cudurkan helay magaca. Waqtiga firaaqada cad wuxuu noqdaa qashin oo wuxuu bilaabaa inuu madoobaado.
Cudurkani waa khatar maaha oo keliya sababta oo ah waxay ka dhigaysaa duurka "midab", waxay sii yaraaneysaa koritaanka, waxay saamaysaa geeddi-socodka muhiimka ah ee geedka. Caleemaha saamoobay iyo caleemaha madow iyo u dhintaan waqti ka dib.
Isla waxay isku dhacaan miraha joojiya koritaanka iyo u engegaan. Haddii caarada budada ah ay ku dhufteen qajaarka xilligii ubax, ka dibna ugxansiisku ma dhali doono, oo waxaa lagaa tagi doonaa dalag la'aan. Caleenta budada ah ee qajaarka waxaa lagu arki karaa sawirka hoose.
Sida cuduro kale oo badan, kareemada budada waxay jecel yihiin huurka badan iyo isbedelka heerkulka. Guuldarada cudurku wuxuu ku dhacaa bilowga xagaaga, marka uu jiro isbedel u dhexeeya guga iyo qaboobaha xagaaga.
Sidoo kale, fungus ayaa laga yaabaa inay u muuqato sababtoo ah bacriminta nitrogen ee xad dhaafka ah. Haddii qajaarka ay ku koraan aqalka dhirta lagu koriyo, sababaha cudurku waa qabyaal ama iftiin yar.
Waa muhiim! Dareemaha caarada xayrta ah waxaa lagu qaadaa fogaan dabaysha ama dhibco yar oo ah qoyaan.
U dawee qajaarka caarada budada ah Waxaad isticmaali kartaa habab dhowr ah:
Hababka dadweynaha ayaa ka caawin kara xaalad kasta, iyo xayrta beedka ayaa ka reeban. Qaado 4 garaam oo ah ash soodhada ah iyo 4 garaam oo saabuun ah 1 litir oo biyo ah. Xalka waa in la buufiyaa qaybta sare ee geedka ee toddobaadkii hal mar.
Hab kale ayaa ku lug leh isticmaalka caano dhanaan. Kala sooc xaji kaddibna kala shub 1 ilaa 10. Kalluunka qajaarka ka soo duub boodhka.
Haddii hababka dhaqanku aanay ku habboonayn, markaa waxaad u jeedsan kartaa kiimiko. Of fungicides in shaqo fiican u leh wax xiirta budada ah, waxaan kala saari karaa Fundazol, Topaz, Topsin iyo Bayleton.
Waa muhiim! Jarista caarada budada ah ayaa la arkay, taas oo iska caabisa dawooyinka qaarkood. Sidaa darteed, haddii maqnaanshaha isbeddelka wanaagsan - isku day fangas kale.
Waxaa sidoo kale jira bey'ado badan oo isboorti ah, laakiin siyaabo aan waxtar lahayn oo loola dagaallamo dharab. Biofungicides - Diyaargarasyo ​​ay ku jiraan kiimiko ah kuwaas oo ku quudiya wakiilka cayayaanka budada ah.
Biofungicides ugu caansan waa Fitosporin-M iyo Planriz. Daroogooyinkaasi waxay ka xoog badan yihiin fangaska, laakiin ma waxyeeleeyaan bini'aadamka iyo dhirta. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo marar badan.
Si looga hortago cudurka, waxay u baahan yihiin inay sameeyaan ka hortagga soo socda:
nadiifinta dhammaan dhirta dhirta laga soo gooyay beerta khudradda (fungus hibernates iyaga);
soo bandhigida bacrimin iyo Bacriminta potash;
waraabiyo qajaarka si adag oo hoos yimaada xididka.
Ma taqaanaa? Waddanka qajaarku waa gobolka kulaylaha ee Hindiya meel u dhow buuraha Himalayan. Warshadda waxaa loo isticmaalay nin in ka badan 6 kun oo sano.
Qanjiraha Downy ama perinospora, qajaarka badanaa jirran. Tani waa cudur ay sababaan dhowr fangaska hoose.
Peronosporosis waxay muujinaysaa caleemaha caleemaha, caleemaha, miraha iyo lakab kale. Geedka jiran ayaa isku duubaya caleemaha, iyo dhibco huruud ah ayaa u muuqda iyaga. Muddo ka dib, dhibcoodku waxay noqdaan buni, caleemuhuna iskood ayay u qulqulayaan. Qaybo ka mid ah dhirta bukaanku waxay ku faafi kartaa mid caafimaad qaba, maadaama ay ku jiraan xayawaanka fungus.
Perinosporosis waa halis sababtoo ah, sida xagta oo budada ah, marka ugu horeysa waxay hoos u dhigeysaa koritaanka baadiyaha iyo miraha, ka dibna waxay keenaysaa dhirta guud ee geedka oo dhan. Sidaa darteed, dagaalka ka dhanka ah cudurka this ee qajaarka waa qasab, maadaama ay jirto halis ah in cudurku ma aha oo kaliya oo kaliya ee aad goobtii oo dhan, laakiin sidoo kale beeraha deriska ah.
Waa muhiim! Peronosporosis waxay saameyn ku yeelanaysaa dhammaan kooxaha dhirta laga soo saaro, oo ay ku jiraan xoornooyinka ornamental iyo xitaa ubaxyo. Sidaa daraadeed, aad ayay muhiim u tahay in la sameeyo daaweyn waqti go'an.
Qanjiraha Downy wuxuu u muuqdaa inta badan dhammaadka guga, marka cimiladu aad u qoyan tahay iyo inta badan roobabku Waa qoyaan korodhay iyo hoos u dhaca difaaca dhirta ee keena caabuqa fungus.
Maadada loo yaqaan "pathogenic microorganisms" waxaa lagu kala qaadaa dulinka dulinka ah (aphid, whitefly iyo others), sidaa darteed aagga infakshanka leh caarada yaryar ayaa aad u weyn. Sidoo kale, cudur ku yaala goobta ayaa la keeni karaa iyada oo la socoto wax beerto. Abuurka aan la daboolin waa mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee cudurka.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u aragto calaamado yaryar oo khafiif ah oo khatarta ah, waxaad u baahan tahay inaad si dhakhso ah u baarto dhammaan baadiyaha iyo, haddii ciladeynta la xaqiijiyo, qaado daaweyn. Dhaqanka dadweynaha soo jeedi siyaabo badan oo loola dagaalamo fangaska:
Isku qas 10 dhibcood oo ah 5% iodine, 1 liitar oo caan ah (ama 1%) caano iyo 9 l oo biyo ah. Xalka ka yimid waxaa lagu buufiyaa jirka kor ku xusan ee geedka.
Kudar 2 koob oo ash qoryo leh leh saddex litir oo biyo ah karkaraya. Cadaadis badan dhowr lakab oo faashad ah. Faleebo soo dhalaalay waxay ku daraysaa 10 litir oo biyo ah. Sidoo kale ka dhig hawlgalka baadiyaha oo dhan, isku dayaya in ay yaraadaan qaybta xagjirka ah ee ciidda.
In 10 litir oo biyo ah, milmaan 1.5 g of potassium permanganate iyo buufin qajaarka.
Marka lagu daro hababka dadweynaha, kimistaanka ayaa loo isticmaalaa. Haddii fangaska uu ku faafo tiro badan oo duurka ah, markaa Fitosporin-M fungicide-ka ayaa ku caawin doona. Sidoo kale, khudradda waxaa lagu buufin karaa 0.4% xal of oxychloride oo bakir ama 1% Bordeaux dareeraha.
Si looga hortago cudurrada mustaqbalka ee khudaarta iyo miraha, waxaad u baahan tahay inaad fuliso hawlaha ka hortagga cudurka.
Dhiroonka 14 maalmood ka dib marka la beero waa in lagu daaweeyaa 1% xal Bordeaux ah. Hawlgalka waa la fuliyaa iyada oo aan loo eegin noocyada kala duwan iyo habka beerto.
Sidoo kale, cudurku wuxuu ka hortagayaa maqnaanshaha haraaga dabiiciga ah ee aagga, nafaqada dhirta iyo mulching carrada.
Haddii qajaarkaaga uu ku korayo aqalka dhirta lagu koriyo, ka dibna ku hayn qoyaan ka hooseeya 80% iyo heerkulka aan ka hooseeyn 20 ° C si looga fogaado infekshanka by fungus. Ha iloobin inaad si joogto ah u quudiso qajaarka, tan iyo difaac sare waa caqabad kale oo jaban oo jaban oo ah xagta uumiga budada ah.
Ma taqaanaa? Qajaar waxaa ku jira potassium, kaas oo hagaajiya shaqada beerka iyo kelyaha. Sidoo kale, qajaarku waa hodan fiyuus. Fiber nukliyeerka ma aha mid jidhka bini'aadamka ah, laakiin wuxuu xakameynayaa shaqada xiidmaha wuxuuna ka qaadaa kolesteroolka xad-dhaafka ah ee jidhka.
Anthracnose - cudur fungal of qajaarka, taas oo ay sababaan deuteromycetes (fangaska aan dhammaystirnayn). Cudurku wuxuu ku faafaa dalagyo khudrado badan iyo miro.
On dhirta, anthracnose u muuqdaan sida dhibco brown leh framing mugdi on caleemaha hoose. Waqti ka dib, dhibco ayaa isku marsiiya, iyo xaashidu way dhinto. Dhibco niyadjab ah ayaa ka muuqda asliga ah iyo caleemaha, gaabinta iyo joojinta dhaqdhaqaaqa nafaqooyinka.
Marka xigta, baadiyaha waxay bilaabaan inay qalalaan, jebiyaan. Sidaa darteed, haddii aan waqti daaweyn la qaadin, markaa waxaad halis ugu jirtaa in dhirta la beero.
Cudurku wuxuu u muuqdaa bilawga May, wuxuu saameeyaa meelaha ugu qoyan ee geedka - caleemaha hoose iyo qaybta hoose ee asliga ah ee qajaar.
Waa muhiim! Miro la go'doomay waa in aan la cunin!
Sababaha ugu weyn ee keena anthracnosis waxaa ka mid ah:
fosfooraska iyo gaajada potassium;
acidity sare ee ciidda.
Tallaabooyinka xakamaynta cudurrada soo jeedi kaliya daawooyinka kiimikada.
Daawee duurka qajaarka leh 1% ka-qaadis kolloid ah.
Sida waafaqsan tilmaamaha, ku buufin qajaarka leh xal 1% oo ah isku darka Bordeaux.
Rusheeyo aagagga ay saameeyeen oo leh 0.5% xal copper sulfate.
Fungicides kale oo burburiya fungus: Oxy, Acrobat MC, Sandofan M8.
Ka hortagga cudurka.
Si aad u bilowdo, sameyso nafaqada dhirta oo adag si kor loogu qaado difaaceeda. Isku day in aad xakamayso habka waraabinta iyo waqtigeeda si aad ula macaamiso cayayaanka cunta ee qaadi kara cudurada.
Samee daaweynta cudurada fangasida daciifka ah si loo hubiyo in uu hubiyo geedka. Haddii aad ka baqeyso in kiimikooyinka ay ku dhici doonaan miro, waxaad isticmaali kartaa qadar yar oo ah daroogo.
Magaca labaad ee cudurka waa caleenta caleenta ah. Badanaa cudurada hore waxay sababeen fungi microscopic, laakiin cudurku wuxuu keenaa bakteeriya (Erwinia), taas oo u egtahay qajaar.
Bakteeriyada ayaa u muuqda cimilada diiran ee qoyaan badan (heerkulka + 25-27 ˚S iyo qoyaanka 80-85%). Bakteeriyadu waxay geli kartaa dhulka oo leh abuur, ciid, ama haraaga geedo. Caabuqa masaafada dheeriga ah ayaa keena dabaysha iyo cayayaanka.
Waa muhiim! Cudurku wuxuu saameeyaa qajaarka labadaba beerta furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo.
Cudurku wuxuu ugu horreyn halis u yahay sababtoo ah waxay ku dhufan kartaa dhirta waqti kasta: laga bilaabo geedo beerto ilaa xilliga uu midho bisil.
Bakteeriyada waxay saameeysaa caleemo, caleemo, miraha. Haddii dhirta uu ku dhaco inta lagu jiro muddada ubax, ka dibna ugxanshiintu maaha. Hoos u dhigista ugu yar waa 30%. Haddii aadan daaweyn cudurka, waxaa lagaa tagi karaa adiga oo aan goosan.
Muuqaalka Caleenta ah muujiyey sida soo socota:
dhibco jaalaha ah oo aan cotyledon caleemaha;
dhibco madaw oo madow ka ah xaashida dibedda;
sameynta dareeraha bacalka ee gadaasha xaashida;
boogaha boodhka ah ee asliga ah, caleemaha, miraha;
Daawee cudurka bakteeriyada Waxaad isticmaali kartaa dhowr siyaabood.
burburinta burburinta dhirta dhoobada;
oo la jajabiyay lakabka buuxa ee lakabka ciidda;
isticmaalka Beelaha u adkaysta cudurada (Cascade, Jilicsan, Kustovoy iyo kuwo kale).
Ha sameynin kiimiko la'aan daaweynta qajaarka. Kuwa ugu caansan waa Kuproksat, Abiga-Pik iyo Fitolavin-300. Sidoo kale, natiijo wanaagsan siinaysaa daaweynta ee duurka Bordeaux dareere ah ama oxychloride copper.
Kahortaga cudurada oo ku salaysan isticmaalka miraha wanaagsan (oo la kariyay xal of 0.02% zinc sulphate) ama geedo qajaar.
Tan iyo inta badan infekshanku wuxuu ku dhacaa marxaladaha hore, ha ilaawin inaad hagaajisid xasaanadda dhirta, iyaga oo quudinaya Bacriminta adag. Joogso qoyaan dhexdhexaad ah oo ciidda ah kana ilaaliya biyaha joogtada ah ee aagga.
Заболевание, вызванное несовершенным грибом Rhizoctonia solani Kuhn. Waxay saamaysaa ma aha oo kaliya qajaarka, laakiin sidoo kale baradho, karootada, kaabajka.
Sababaha ugu weyn ee boqoshaada on qajaarka - dhererka dhulka iyo waraabinta xad dhaafka ah. Xaaladdan oo kale, pathogen-ku wuxuu dareemaa heer sare oo qoyaan caadi ah iyo heerkulka laga bilaabo 3 ilaa 25 ° S.
Haddii rimanka razoktoniozom jiran - tiro dhir ah oo dhir ah ayaa u dhiman doona (waxay u dhaqmaan sida kalluunka roota), oo si fudud u kala jajabay kala badh oo ka baxa.
Warshad qaangaar ah, dhammaan qaybaha baadiyaha ayaa la saameeyaa marka laga reebo inflorescences. Caleemaha qallalan, miraha waxay ku daboolan yihiin "nabraha" oo aan la kaydin. Dhirta qoyaanku ma dhiman doono fangaskaan, laakiin waxaa jiri doona khasaaro weyn oo dhalid ah.
Jooji rhizoctoniosis on geedo waa la aqoonsan karaa on qoorta basal jaale ah iyo dhibco orange iftiin on caleenta cotyledon. Warshad qaangaar ah ayaa ka jawaabeysa cudurka si ka duwan: caleemaha waxaa lagu daboolay dhibco badan oo mugdi ah oo ah qaab aan caadi ahayn, dhibco qoyan oo leh nabaro madow ah ayaa lagu sameeyay miro, petioles ayaa lagu daboolaa boogaha qulqulaya.
Ka saar fangaska ka soo qajaarka wuxuu noqon karaa kiimiko ama hab nololeed. Haddii meel ballaaran oo ku filan ay saameeyaan cudur fungal ah, ka dibna fungicides waa in la isticmaalaa, kuwaas oo ah: Kvadris, Strobe, Metamil MC iyo Ridomil Gold MC. Kuwani waa fungicides ugu caansan ee loo isticmaalo beeraleyda iyo beerta.
Xulashada daaweynta bayoolojiga oo ku saleysan bakteeriya iyo shillin kuwaas oo cuno wakiilka keena rhizoctoniosis: Trichodermin, Planriz iyo Baktofit. Waxaa jira daroogo meelo yaryar ah, dib-u-daaweyn ayaa loo baahan yahay ka dib. Daawooyinka noocan ahi ma waxyeeleeyaan bini'aadamka ama dhirta, sidaas darteed waa bedel wanaagsan.
Ku ka hortagga muuqaalka Cudurka fungal, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerarka soo socda:
ilaali wareegga beeraha;
kormeerida qoyaanka hawada iyo carrada (gaar ahaan xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo);
mulch oo leh filim ama qalab kale;
burburin haramaha oo ka nadiifi aagga ka hara haraaga;
u dabacsan carrada waqti habboon.
Cudurkan waxaa sababa fayruska Cucumber cucumber virus. On geedka maskaxda fayrasku waa muuqataa sida caleemaha qarxa, muuqaalka mugdi madow ama caddaan. Caleemuhu waxay noqdaan midabkoodu midabkoodu yahay, midabkuna waa la duudduubay. Marka lagu daro caleemaha, miraha qajaarka ayaa la saameeyaa (daboolay dhibco cad) iyo asliga ah (dildilaacyo iyo dildilaacyo).
Fayrasku halis ayuu ku jiraa, illaa inta la ogaanayo, meelaha waaweyn ee dhulka ayaa laga saari karaa. Geed-diir leh ayaa lumisa kobcitaanka, iyo wax-soo-saarku waa kala badh.
Fayruska waxaa lagu qaadaa wadajirka dhulka iyo qaybaha cudurada ama jeermisyada geedka. Qajaar ayaa ku dhici karta labadaba wakhtiga beerto, iyo koritaanka dhan iyo ugxansidida miro.
Fursada cudurku wuxuu kordhiyaa nabarka iyo dhaawaca jidhka kor ku xusan ee qajaar. Waxaa muhiim ah in la fahmo in fayrasku uu ku dhici karo aqallada lagu koriyo iyadoo la adeegsanayo ciidda wasakhaysan. Sidoo kale, duleedyada cayayaanka waxay ku gudbin karaan tiro badan oo duurka ah.
Waa muhiim! Casiirka, caleemaha, caleemaha, caleemaha iyo caleemaha dhirta ay saameeyeen waa sidayaal fayruska ah, sidaas darteedna waa la gubay meel ka baxsan goobta, iyo qalab kasta oo la xidhiidhay dhaqanka bukaanka ayaa la kala qaadaa.
Mosaic wuxuu saameeyaa geedaha iyadoon loo eegin xaaladahaSi kastaba ha noqotee, qoyaan badan iyo heerkulka hawada laga bilaabo +25 ˚S iyo ka sareeya abuuritaanka xaaladaha ugu fican ee fayraska.
Fayraska Mosaic looma daaweyn karoSidaa darteed, dhirta ay saameeyeen waa in si dhakhso ah loo geeyaa. Nasiib wanaag, noocyo badan oo qajaarka ah oo u adkeysanaya fayruska (Zozulya, Lord, Arina, Verenta) ayaa la siinayaa.
U baahan tahay inaad fuliso tallaabooyinka ilaalinta ee ka hortagga fayraska maskaxda, kuwaas oo:
nadiifinta haramaha ka yimaada goobta;
daaweynta abuurka preplant oo leh kiniinka potassium;
burburinta cudurada laga yaabo in cudurku keeno.
In la ogaado in fayrusku ku sii jiri karo dhulka, substrate u dhow kaniisada ay saameeyeen waa la qoday oo la tuuray, ama la karkariyey. Kufsiir gaar ah oo loogu talagalay jeermisyada iyo lagu koriyo.
Cladosporium cucumerinum Ellis Arthur waxa uu keenaa qajaarka cagaarka, sidaas darteed cudurka waxaa badanaa loo yaqaanxayawaan".
Cudurka dhirta ku yaala ayaa muujinaya lafdhabarka midabka leh saytuunka. Badanaa dhibco ayaa ka muuqda midhaha. Waqti ka dib, dhibco waxay ku sameeyaan dhibcaha, ka dibna dhibco madow oo adag. Ka dib bogsashada, dhibcaha waxaa lagu daboolay filim cad.
Cudurku waa halis, maxaa yeelay waxay sii yaraanaysaa koritaanka geedka oo dhan, wuxuu burburiyaa miro wuxuuna joojiyaa horumarkooda. Marka ay si buuxda u waxyeeloobeen, duurka qajaar ah ayaa qalajin kara.
Fungus wuxuu ku dhacaa qajaarka qoyaan badan iyo heerkulka hooseeya. Xaaladaha noocan oo kale ah waxay ku samaysan karaan aqalka dhirta lagu koriyo oo leh heerkul aad u kulul.
Caabuqa qajaarka waxay ku dhacdaa ciidda. Inta badan, fungus overwinters on qaybaha cayayaanka dhirta iyo haramaha. Wareegga beerta ayaa la soo qaadan karaa oo la socota miraha aan la nadiifin.
Dhirta daaweynta hababka caanka ah iyo fungicides labadaba. Hababka caanka ah ee daaweynta waxaa ka mid ah ku buufinta duurka ee leh xayirada chloride ee iodine ama serum biyo (1 illaa 10).
In badan oo wax ku ool ah ee la dagaallama jiritaanka saytuunka kiimikooyinka.
Daadinta 1% xal of Bordeaux dareeraha.
Fumigada leh sulfur dioxide laba maalmood. Waxaa loo isticmaalaa lagu koriyo.
Sidoo kale Cudurka waa laga hortagi karaa, haddii aad bacriminta ku sameyso hab wakhti go'an, nadiifi ciidda ka soo harta dhirta iyo jeermisyada lagu koriyo iyo lagu koriyo. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo wareegga dalagga iyo ilaalinta qoyaanka hawada.
Ma taqaanaa? Laga soo bilaabo barta aragtida ee botan, midhaha qajaar waa bocor, taas oo ah, waa mid miro, laakiin laga bilaabo barta ee view of karinta, qajaar ah waa khudradda.
Hadda waxaad aqoonsan kartaa cudurka iyo daaweyn kartaa. Ogaanshaha hababka ka hortagga cudurada qajaarka, waxaad ka hortagi kartaa guuldarada geedka iyo soo ururin goosashada wanaagsan.